Anarana tamin'ny alalan'ny Skype - hianatra zavatra alalan'ny Skype, vidin-javatra sy ny famerenana ny lesona
Anarana tamin’ny alalan’ny Skype — hianatra zavatra alalan’ny Skype, vidin-javatra sy ny famerenana ny lesona
Azafady drafitry ny lesona voalohany amin’izao fotoana izao, dia tsy mandao ny tranonkala mba manararaotra ny fihenam-bidy. Sehatra an-tserasera manome nandroso ny fomba hianarana zavatra tamin’ny Mpampianatra za-draharaha, izay vonona ny handany anao ny lesona, izay mandrakizay ianao. Momba ny mpandray fitenenana manome isan’andro ny fampianarana an-tserasera amin’ny ny vidin-javatra tsara indrindra, afa-tsy isaky ny adiny iray. Raha fantatrao izay mitady, ary avy eo dia haka ny safidy tonga lafatra araka ny teti-bola sy ny tanjona, mety mampiasa ny fikarohana eo amin’ny tranonkala. Mbola misy ny fisalasalana. Dia henoy ny hevitry ny tena ny mpampiasa sy jereo maro reviews, izay eo amin’ny sehatra bebe kokoa. Mifidy ny mpampianatra sy ny hanomboka ny fianarana miaraka amin’ireo izay ho anjara amin’ny fiainana avy minitra voalohany ny mpianatra. Miaraka amin’ny mpampianatra anareo no hitondra ho lavorary ny zavatra tsy fotoana. ‘Mahafinaritra mahay mpampianatra. Tsara sy haingana no hita fa ny tena banga. Lehibe manam-pahaizana manokana. Izany dia mazava fa tsy izany ihany no mampianatra, fa koa tia ny foto-kevitra.
Teny anglisy, frantsay, ny fiteny, ny teny espaniola, portogey fiteny, teny italiana, amin’ny fiteny Japoney, ny Filozofia, ny anarana, ny anarana, ny anarana, ny teny grika, ny fiteny Indoneziana, Siansa Sosialy sy ny siansa mahaolona. ‘Mpampianatra tsara, manazava ny zavatra rehetra misy, tsara mahatsiaro ny fahalemena sy miasa azy indray. Toy Fernando manana fahatsapana tsara hatsikana, ny lesona dia mora, ny fifadian-kanina sy tsy henjana).’. Manana traikefa be tsy afa-tsy ny fampianarana nefa koa amin’ny teny vahiny ny fianarana. Izaho manokana sy haingana nahay teny anglisy sy portiogey misosa tsara sy efa somary tsara lenta ny frantsay ary espaniola. Raha tena te hiteny sy mianatra ny teny, ary tsy tsotra. Ihany aho tany am-piandohana ny lalana, fantaro ny anarana, saingy manantena aho fa miaraka amin’ny Tatiana afaka manao izany hianatra izany.’. ‘Misaotra anao be dia be.
Faly aho amin ny lesona
Misaotra Paulo, efa nihatsara ny teny portiogey. Paulo koa nanampy ahy toy ny mpandika mba hijery ny fikarohana sy ny marina ny fahadisoana. Lesona dia manao sy ny mahasoa. Nianatra zavatra betsaka momba ny kolontsaina ao Brezila, ary tena te-hitsidika izao ity firenena ity. Hi. Ny anarako dia Alexander sy ny ahy. Teraka tao Portiogaly, fa efa nonina teto hatramin’ny folo taona, ka zavatra ho ahy amin’ny maha-reny. Dia hanampy anao bebe kokoa miteny portiogey, mba hanatsarana ny feo sy ny mahatsapa ny teny sy ny firafitry ny fehezanteny. Nanazava ny dikan ny fanehoana andavanandro ny fiainana sy ny mahazatra fahadisoana. ‘Alexander dia tena tsara mpitaiza ho an’ny beginners mba hianatra ny fiteny portiogey. Azy tsara mba tsy mampianatra afa-tsy ny fitsipi-pitenenana, fa koa ao amin’ny fiteny. Rehefa Alexander mipetraka any Lisbon, izy no mahalala izay fanehoana ny anarana ampiasaina ao amin’ny andavanandro ny teny, ary izay tsy misy kilema ara-boajanahary. Izy no tsara indrindra fahadisoana iombonana amin’ny teny portiogey miresaka amin’ny olona amin’ny anarana, ary avy hatrany dia manakana ny bika aman’endriny. Mba manao Alexandra dia mahaliana. Dia mamporisika ny ho mpitaiza. Izaho efapolo taona, ary ny vavy, dia samy miatrika Alexandra, ary samy tsy sambatra.
dimy amby roapolo
Eo ny mombamomba ny espaniola, ary italianina ny fiteny portiogey mety ho toa tsy tian’ny olona. Saingy raha ny marina, izany no teny nolazain tapitrisa eo ho eo ny olona, izay tsy tompon-tany. Izany no fiteny ofisialy ao Portiogaly, Brezila, Mozambika, Angola ary ny sasany hafa firenena teo aloha zanatany portioge. Ny fianarana zavatra amin’ny alalan’ny Skype ho tena mora ho an’ny olona miteny espaniola, italiana, na frantsay, toy ny zavatra ny fitsipi-pitenenana dia mitovy amin’ny fomba maro ny fitsipi-pitenenana rafitra hafa ny olon-tiany teny, ary manana be dia be ao iombonana amin’ny teny latinina. Fa ny ankamaroany marina izany ho an’ny Eoropeana portiogey, ny Breziliana teny dikan-manana fahasamihafana amin’ny fitsipi-pitenenana, fanonona sy ny tsipelina. Aza matahotra ny hitrandraka Anarana amin’ny Skype, toy ny kalitaon’ny aterineto lesona dia feno fanajana amin’ny olona-tserasera ao an-trano. Ankoatra izany, ianao dia ho malalaka kokoa ny fandaharam-potoana, araka ny tokony tsy ho eo amin’ny fitoerana iray, amin’ny fotoana sasany. Ny vidin-javatra ho an’ny lesona amin’ny alalan’ny Skype matetika kokoa ambany: ohatra, ao amin’ny sehatra afaka mahita ny mpampianatra iray ho an’ny anarana
← Breziliana Anarana
Mahafinaritra ao Portiogaly →